ဖက်ရှင့် Olympus အုပ်ချုပ်မှုကိုထိပ်ပေါ်မှာတာရှည်အမှတ်တံဆိပ်လူသိများခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်း ပို. ပို. ငယ်ရွယ်ဒီဇိုင်နာများပိုပြီးမကြာသေးမီကအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ တိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုအချို့သည်အသိအမှတ်ပြုမှုရဖို့ရန်နှင့်အကြိုက်ဆုံးတို့တွင်အကြိုက်ဆုံးအကြားဖြစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဖက်ရှင်လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုမျိုးဆက်အတွက်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေတဲ့အသက်ရှုများမှာသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများ၏သစ်ကို collection များကိုအကဲခတ်ငါငယ်ရွယ်ပြီးထက်မြက်လက်ဘနွန်ဒီဇိုင်နာ Krikor Yabotiana ဖို့အာရုံကိုဆွဲချင်တယ်။ မိမိအဖန်ဆင်းခြင်းဟောလိဝုဒ်အတွက်အများဆုံး avid ဖက်ရှင်များ၏စိတ်နှလုံးကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီ, နာမတော်ကိုပိုပြီးမကြာခဏအရှိဆုံးဂုဏ်သတင်းပြပွဲထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
Krikor Jabotian, လက်ရှိလူသိများဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာအများစုလိုပဲတစ်ချိန်ကအတှေ့အကွုံမြား၏အောင်မြင်မှုများနှင့်အတူသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့သည်။ အကြောင်းခုနစ်နှစ်သူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအများဆုံးရှာသောအခါ-ပြီးနောက်ဒီဇိုင်နာများ၏တဦးတည်း၏ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သည် Elie Saab ။ ယင်းဖန်တီးမှုဌာနများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီးနောက်သူနောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ 2009 ခုနှစ်တွင် Krikor ထားတဲ့သူ့ကိုနာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုဆောင် ခဲ့. , ဒါပေမယ့်လည်းထိုအကောင်းမွန်စွာထူထောင်သည့်ကုမ္ပဏီများအကြားအသစ်နှင့်မူရင်းတစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့မသာ။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် ၎င်း၏ collection များကိုဇိမ်ခံနှင့် grandeur, ကြော့ရှင်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့နေကြသည်။
ဆင်မြန်း၏စုစည်းမှု Krikor Jabotian
လူအားလုံးတို့သည်ဆင်မြန်းခေတ်မီပြီးကြော့ကြည့်ရှုပါ။ စုဆောင်းခြင်း၏ဤအင်္ဂါရပ်များတွင်ရင်းနှီးနူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု bagroveyuschey ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအခုနေဝင်ချိန်ကောင်းကင်ပြာနှင့်နွေးထွေးသောသဲ၏ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါမော်ဒယ်များ၏အမြောက်အများဒါ့အပြင် crystals နှင့်ပုတီးတစ်ပြအတူအလှဆင်။ Krikor Jabotian နူးညံ့သိမ်မွေ့သောမင်းသမီးထဲသို့မိန်းကလေးတွေလှည့်ခြင်း, အာရုံ၏အချစ်ဇာတ်လမ်းပြန်ကောင်းလာတာကို။ ဤသည်က၎င်း၏ညဦးနှင့်မင်္ဂလာဆောင်တွင်ဆင်မြန်းအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အလုပ်၏နောက်ထပ် feature ကိုတိုင်းအသေးစိတ်ဖို့အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်စုဆောင်းခြင်း Krikor Jabotian Haute couture အပိုဘာမှရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, နှင့်လိုင်းများဖြတ်တောက်မှု, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, အလှဆင်ခြင်းနှင့်အရောင်အဆင်းအနုပညာအလုပ်သို့ဖြတ်ထည်ပြောင်းလဲ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့လိုက်ဖက်စွာရောနှောနေခြင်း။
နွေရာသီ sundresses 2016
Chiffon စားဆင်ယင် 2016
ဖက်ရှင် 2016 Caps
Long ကဆင်မြန်း 2016
Demi ဘွတ်ဖိနပ်, 2013
Catarrhal angina - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
မိမိတို့လက်နှင့်အတူ plinths ၏ installation
Celine Dion အမွှာများ၏ပြုစုပျိုးထောင်အပေါ်ဘီယွန်းနှင့်အတူသူမ၏အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေ
ပန်းသီးပင်ပေါ်မှာအနီရောင်အရွက် - အကြောင်းရင်းများ
ဂျုံယာဂု "ချစ်ကြည်ရေး" - စာရွက်
ဘယ်နှစ်ယောက်ကယ်လိုရီတစ် curdled သနည်း